lundi, 28 septembre 2020 13:10
Toe-karena: Tsy mitsaha-miakatra ny sandan'ny vola vahiny
Ny zoma 25 septambra dia tafiakatra Ar 3 873,57 ny dolara amerikanina USD, ary Ar 4 512,46 ny 1Euro. Mitontongana arak'izany ny vola malagasy MGA na Ariary. Tamin'ity volana septambra ity dia tsy nidina ambanin'ny 4500 ariary mihitsy ny 1Euro, raha niodidina ny 3800ariary hatrany ny dolara amerikanina.
lundi, 28 septembre 2020 10:47
Fifamoivoizana: Noraran'ny Frantsay tsy higadona any Frantsa ny zotra Air Madagasikara
Noho ny tsy faneken'ny fitondrana malagasy ny hitondran'ny sidina Air France mpandeha avy any Paris hiazo an'Antananarivo, na dia manaraka ireo fepetra ara-pahasalamana, dia nandrara ny ahatongavan'ny zotra Air Madagascar ny alatsinainy 28 septambra higadona any Paris ihany koa Lafrantsa. Izany, hoy hatrany ny fanambarana, dia ny fampitoviana lenta ara-barotra eo amin'ny kaompania roa tonta, ka samy ho afaka hitondra mpandeha mandroso sy miverina.
Faritra Atsinanana: Fampiroboroboana ny fambolena Papaye SOLO
Miroborobo tokoa satria mora ambolena ary tian’ny tany aty Atsinanana ny Papaye SOLO. Ankoatra ny karazany efa misy an-taonany maro, dia nampidirin’ny CTHT na Centre Technique Horticole de Toamasina teto amin’ny faritra tamin’ny taona 2005 ny PAPAYE SOLO, ary tamin’ny taona 2006 kosa ny FORMOSA sy ny SUNRISE. Ny papaye na PAZA na VOAPAZA, dia voankazo avy agny Mexique sy Amerika afovoany, nampidirina teto Madagasikara tagny amin’ny taon-jato faha-XIX avy tao amin’ny nosy La Réunion.Anarana siantifika: « Carica papaya », voankazo fianakaviamben’ny « Caricaceae ».
mardi, 22 septembre 2020 12:54
Faritra Atsinanana: Famokarana ANGOVO
Miara-manaiky amin’ny rehetra ny Governoran’ny Faritra Atsinanana RAFIDISON Richard Théodore, fa antoka voalohany ho an’ny fampandrosoana ara-indostria vaventy sy salantsalany, ny fananana angovo. Milaza koa Andriamatoa Governora fa ny Faritra Antsinanana tantaniny dia manana akora maro, ka afaka mampiroborobo ny «Energies renouvelables» na angovo azo havaozina. Raha tsy hilaza fotsiny isika ny «Energie hydro-électrique» na ny azo avy amin’ny Rano, amin’ny fananana renirano lehibe sy matanjaka toy ny Mangoro any Mahanoro, Rianila any Brickaville, ary Ivondro sy Ivoloina sy Onibe ao Toamasina2. Ka ny fotodrafitr’asa lehibe no sisa tsy ampy. Noho ny fanasan’ny Orin’asa JIRAMA, sy noho ny faniriany manokana, dia nandeha nitsidika tany an-toerana ny Governora sy ny ekipany: - VOLOBE 1: Tetik’asa natao tamin’ny taona 1931, goavana sy moderina ary namaly ny filàna io tetik’asa io tamin’izany fotoana izay ary namokatra herinaratra 6 Mégawatts. Nasiam-panavaozana natetika taty aoriana, ary mbola manampy mamatsy an’i Toamasina hatramin’izao. Volobe 1 dia ao amin'ny Kaominina ambanivohitra Ambodilazana, 50km mitsofoka eo Fanandrana, Distrika Toamasina 2
Petit à petit, les activités écotouristiques à Andasibe ont repris leur souffle à la suite de la réouverture du parc d’Analamazaotra le 5 septembre dernier. Les touristes – nationaux et étrangers – sont revenus, même en nombre encore réduit, après six mois de confinement marqués, entre autres, par la fermeture de tous les sites touristiques. « Nous recevons une trentaine ou quarantaine de clients par jour durant le week-end contre pas plus de 5 touristes par jour durant tout le reste de la semaine », dit un employé de Madagascar National Parks (MNP). L’agence gouvernementale, qui gère un réseau de 43 parcs nationaux, a décidé de les rouvrir aux visiteurs en faisant appliquer un protocole sanitaire spécifique.
Ny volana janoary 2019 ny Ministeran’ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy - MEDD - dia namoaka naoty laharana N°01/19/MEDD izay mandrara ny fitrandrahana ny hazo. Tafiditra tao anatin’izany na ny hazo sarobidy na ny hazo tsotra. Vokatr’izany dia mandalo kirizy mavesatra ireo orinasa ara-dalana mpisehatra amin’ny fitrandrahana sy fanodinana hazo eto Madagasikara, ary efa misy ny manakatom-baravarana vokatry ny tsy fisian’ny akora ho ampiasaina. Nangataka fihaonana tamin’ny Minisitry ny Tontolo iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy izy ireo mba hijerena miaraka ny vahaolana amin’ny seham-pihariana sahaniny. Notanterahina ny zoma 11 septambra izany fihaonana nitadiavam-bahaolana teo amin’ny roa tonta izany, izay notarihin’ny Minisitra Raharinirina Baomiavotse Vahinala, sy ny tompon’andraikitra avy amin’ireo orinasa maro, toy ny : Hazovato, Bonet, Tropical Woods, GNEFEM, Kidoro, Eben Menuiserie, Kinga,…
Mpiasa amin’ny orin’asa mpanodina akanjo manodidina ny efajato no nalefan’ny tompon’andraikitra mpitantana ho “chômage technique”, izany dia noho ny antony tsy mbola mazava amin’ireo mpiasa izay voakasik’izany. Tsy misy ny fanomezana pré-avis fa dia ny ambin-karama sisa no homen’ny tompon’ny orin’asa. Araky ny filazan’ireo mpiasa moa dia misy hatrany anefa ireo olona vaovao hampidirina miasa ao amin’ity orin’asa ity, ka mapametra-panontaniana azy ireo. Marihina moa fa efa mpiasa tranainy ny ankabetsahan’ireo voakasika izao fampitsaharana miasa izao. Ka mampiantso ny mpanao gazety izy ireo ny alakamisy maraina eny ANDRAHARO ho fanazavana misimisy kokoa mahakasika izany olana sedrain’ireo mpiasa izany. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 04 septembre 2020 21:04
Faritra Atsinanana, Maromamy- Brickaville: Lamesa manokana
Tonga nitarika Lamesa manokana tao amin'ny Orinasa SASM ny Kardinaly TSARAHAZANA Desiré, notronin'ny Père Vicaire Général. Nanatrika izany ny Governora RAFIDISON Richard Théodore sy ny Préfet RAZAFIARISON Jean Jugus, ary ny mpitantana ny orin'asa SASM (Tale jeneraly, filankevi-pitantanana) sy mpiasa marobe notarihin'ny Talen'ny orin'asa.
Nanamafy ny fitokisany amin’ity teratany Nizeriana ny 100% ny mpifidy, ary dia voafidy fanindroany ho filohan’ny Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana i Akinwumi Adesina. Dimy taona ny fe-potoana iasany amin’izany. Maro ny tetikasa fampandrosoana vatsian’ny BAD eto Madagasikara. Efa in-droa nitsidika teto i Akinwumi Adesina, ny taona 2016 sy ny taona 2019, nitarika fivoriana iraisam-pirenena ary koa nijery ireo tetikasa vatsian’ny BAD vola. (Jereo Sary Tohiny)
Izaho olona mpandraharaha, ary tsy misy sentiment na resaka fanampiana ny fandraharahana, le client est roi raha mandoa vola izy, raha tsy mandoa vola dia tribunal, huissier, saisie no resaka. Le bon compte fait des bons amis en business, tsy midika fa hanao toetra ratsy akory izany, fa mety misy ady varotra, arrangement payement, fa rehefa nifanaraka dia samy mitazona ny teniny. Zavatra matetika mpitranga ny hoe, niadian'ny client varotra 200 000ar ilay entana na ilay asa, nefa tsy nomenao azy, nefa avy eo entinao restaurant indray izy handanianao 300 000ar, efa resaka samy mpinamana indray iny, na tafiditra amin'ny politique de fidélité gros client. Ny banky fampindramam-bola dia business fa tsy sosialy, ka aza afangaro ny resaka, raha te hanao asa sosialy dia mitadiava vola dia omeo izay sahirana. Ny olona sahirana tsy ampindramim-bola, satria anampy trotraka ny fahasahiranany izany, fampahantrana azy izany. Aoka ny orinasa no ampindramim-bola ka hamokatra ampidirany mpiasa miasa, na terena izay orinasa ampindramim-bola tsy akana zana-bola hapakatra ny karaman'ny mpiasany, na ilay zana-bola tsy naloany 15-20% iny ihany aza. Patrick